Easyzọ atọ dị mfe iji malite nyochaa akara gị n'ịntanetị | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 22, 2010 Sunday, October 4, 2015 Michael Reynolds kwuru
Ọ bụrụ na ị na-agbaso usoro mgbasa ozi ọha na eze ma ọlị, ikekwe ị nụla ọtụtụ ihe banyere ịbanye na "mkparịta ụka" na otu esi esonye. May nwekwara nụkwa ịdọ aka na ntị: "ndị mmadụ na-ekwu maka ụlọ ọrụ gị ma ị nọ ya ma ị nọghị". Nke a bụ eziokwu ma bụrụkwa ezigbo ihe kpatara ị ga-eji mbanye na mgbasa ozi mmekọrịta ma bido isonye. Ọ bụrụ na ị bụ akụkụ nke mkparịta ụka ahụ, ị ​​nwere ike ịza ajụjụ, mebie njikwa, ma nye ndị ahịa ọrụ ka mma.
Yabụ kedu ka anyị ga - esi jigide mkparịta ụka niile? Ndị a bụ ihe atọ ị nwere ike ịtọ n'ime obere nkeji iji bido mkparịta ụka nlebara anya gbasara akara gị.
Tinye n'ọrụ Ihe ngosi Google. Nke a nwere ike bụrụ otu n’ime ngwa ọrụ kachasị dị nro mana kachasị dị irè maka nlekota nyocha. Ihe ngosi Google na-enye gị ohere ịmepụta ọkwa doro anya nke ga-ezitere gị oge ọ bụla ọdịnaya pụtara na weebụ nke nwere isiokwu ndị ahụ.
Ebe ọ bụ na aha ụlọ ọrụ m bụ SpinWeb, enwere m anya mwube iji nyochaa okwu "SpinWeb", nke pụtara na m na-enweta ozi ịntanetị oge ọ bụla akpọrọ ụlọ ọrụ m na weebụ.
Melite ihe ngosi na TweetBeep. TweetBeep bụ ọrụ n'efu (maka ihe ngosi 10) nke na-enyocha mkparịta ụka na Twitter wee zitere gị ozi ịntanetị na-edepụta tweets niile nwere isiokwu gị. Ihe omuma nke edoziri maka "SpinWeb" na-ezitere m kwa ụbọchị (ma ọ bụ oge ọ bụla, ma ọ bụrụ na m masịrị) email nke nwere tweets niile na-ekwu banyere ụlọ ọrụ m.
Nke a na-eme ka ọ dịrị m mfe ịhọrọ nhọrọ n'ime mkparịta ụka na-amasị m.
Nyochaa mmekọrịta mmekọrịta na Nkwado. Nke a ọrụ tracks n'elu 80 elekọta mmadụ na netwọk maka gị isiokwu, tinyere Twitter, Facebook, FriendFeed, Youtube, Digg, Google wdg. SocialMention nwekwara ụfọdụ mara mma ndị ọzọ atụmatụ na nyochaa ike na mmetụta nke mkparịta ụka.
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ụzọ dị mfe iji bido na nlekota nke ika site na mgbasa ozi mmekọrịta, itinye nkeji ole na ole ịtọlite ​​ngwaọrụ atọ a bụ ebe dị mma ịmalite. Ọ ga-emezi mgbalị gị ma mee ka ị mata ihe a na-ekwu banyere ụlọ ọrụ gị. Ga-ahụkwa na ọ na - ewusi mmekọrịta gị n'ịntanetị ike n'ihi na ị nwere ike ikere òkè mgbe ọ bụla onye ọ bụla na - ekwu maka gị, nke ahụ bụ nnukwu ọrụ ndị ahịa.
Tags: nlekota orugoogle alertsnlekota oruelekọta mmadụ mataelekọta mmadụ kwurunlekota oru
Jenụwarị 24, 2010 na 2:48 PM
Akwa post, Michael!
Nlekota oru bu ntoputa nke ulo oru mgbasa ozi. Ige-ntị abụrụla ihe mbụ, mana ezughi oke. Njikọ dị mkpa. Dabere na ihe nlekota gị na itinye aka gị dị, ngwaọrụ ndị a dị n'elu nwere ike ịrụ ọrụ, ma ọ bụ ọ ga-adị mkpa ka ị gaa ihe ngwọta dị arọ karị. Mgbe inwere ohere, biko lelee ngwa ọrụ Community Insights si Biz360 - ụzọ dị ukwuu iji nyochaa, chọpụta ndị kachasị nwee mkparịta ụka mkparịta ụka a, ka ị nwee ike itinye aka, ọbụnakwa ịnye ndị ọzọ ọrụ ụlọ ọrụ itinye aka (socialCRM) ). Na-eche free ping m oge obula.
mogneva (na) biz360 (dot) com